Ubuntu 16.04 LTS: mukusimudzira uye ine mazuva ekuburitsa | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus ichave neLinux 4.3 kernel
Canonical's timu yekusimudzira yakanangana neUbuntu desktop yekuparadzira iri kushanda nesimba pakuburitswa mune ramangwana. Ubuntu 16.04 LTS, inonzi Xenial Xerus, ichave neLinux 4.3 kernel mushure mekuburitswa kwayo kwakagadzikana. Sezvo Linux 4.2 iri iyo inounza Ubuntu 15.1o Wily Werewolf kuhupenyu, imwe nhanho iri kuenderera mberi ikozvino ichatorwa iine imwe yepamusoro-to-date kernel vhezheni.
Así yakaziviswa naJoseph Salisbury, vachitaura chiitiko ichi chitsva muboka rinoenderana rebudiriro. Tsamba iyi yakazivisawo kuti hwaro hwavanoshandisa parizvino huri paLinux 4.2 iyo yavanoshandira Ubuntu 16.04, kunyangwe ichiti Linux 4.3 vhezheni yakavhurika yekusimudzira. Iyo Ubuntu 16.04 LTS yekuvandudza maitiro ichangotanga uye isu tese tinotarisira kuti, kunze kwekuvandudzwa maererano nekernel, inosanganisirawo zvimwe zvinonakidza ...
Zvita 31, zuva rekupedzisira ra2015 richava zuva rakasarudzwa kuve neinowanikwa yekutanga Alfa yekuvandudza vhezheni yeUbuntu 16.04 LTS yatinogona kuyedza. Chipo chakanaka cheKisimusi icho Canonical chinoita kuti isu tive vevazhinji vateveri veUbuntu. Kwapera mwedzi, Alpha 2 ichasvika, musi waNdira 28, 2016. Kune Beta tinofanirwa kumirira kusvika Kukadzi 25 uye iyo Beta yekupedzisira munaKurume 24. Pakupedzisira, iyo yekupedzisira vhezheni ichaburitswa muna Kubvumbi 21, 2016.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus ichave neLinux 4.3 kernel
Zvakanaka, zuva rasvika, isu tatova muna Chikunguru uye zvinoita sekunge UBUNTU 16.04 LTS haisati yasunungurwa.
Pindura kuna Grippo
AMD inovimbisa kuvandudzwa kwemifananidzo yayo muLinux ne112%
Puppy 6.3 Slacko yave kuwanikwa